Hello Nepal News » नेसन्स लिग : रोनाल्डोबिनै पोर्चुगलद्वारा क्रोएसियाको धुलाइ !
नेसन्स लिग : रोनाल्डोबिनै पोर्चुगलद्वारा क्रोएसियाको धुलाइ !
युइएफए नेसन्स लिग फुटबल प्रतियोगितामा साबिक च्याम्पियन पोर्चुगलले शानदार सुरुआत गरेको छ । दोस्रो संस्करणको पहिलो खेलमा उसले आफ्ना नियमित कप्तान तथा प्रमुख खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोबिनै पनि क्रोएसियामाथि ४–१ को शानदार जित निकाल्न सफल भयो । आफ्नो भूमिमा भएको खेलमा पाहुना टोली क्रोएसियालाई हराउनेत्रममा पोर्चुगलका लागि ४ जना फरक–फरक खेलाडीले गोल गरे ।
क्रोएसियामाथि पूर्ण रूपमा हाबी भएको पोर्चुगलले खेलको सुरुआतबाट चर्को दबाब बनाएर खेलेको थियो । उसका प्रहारमध्ये ४ प्रहार गोलमा परिणत हुँदा ३ प्रहार पोलमा र ३ प्रहार बारमा लागेर लागेर फर्किएका थिए । युवा खेलाडीले भरिभराउ पोर्चुगलले सन् २०१८ को विश्वकप उपविजेता टोलीलाई निरीह साबित गर्दै फराकिलो जित निकाल्यो ।
पोर्चुगलले खेलको पहिलो हाफमा ६ पटक गोलका सहज अवसर गुमाएको थियो । पटक–पटकका अवसर गुमे पनि पहिलो हाफको अन्तिम समयमा जुआन कान्सेलोले लामो दूरीबाट कडा सटमा गोल गर्दै पोर्चुगललाई १–० को अग्रता दिलाए । त्यसपछि दोस्रो हाफमा पोर्चुगलले ३ गोल थपेर आफूले १ गोल खायो ।
खेलको ५८औं मिनेटमा डिएगो जोटाले गोल गर्दै पोर्चुगललको अग्रता दोब्बर बनाए । त्यसपछि ७५औं मिनेटमा युवा स्टार जुआओ फेलिक्सले लामो प्रहारमा सुन्दर गोल गर्दै खेलमा ३–० बनाए । त्यसपछि इन्जुरी समयको पहिलो मिनेटमा क्रोएसियाका लागि ब्रुनो पेटकोभिचले गोल गरेर खेल ३–१ बनाए पनि त्यसको ३ मिनेटमै आन्ड्रे सिल्भाले गोल गरेपछि खेल पोर्चुगलले ४–१ ले जित्यो ।
खेलभरिमा पोर्चुगलले क्रोएसियाको पोस्टमा कूल २७ पटक हानेको थियो, जसमा ११ सट अन टार्गेट थिए । क्रोएसियाले जम्मा ५ पटक मात्रै हान्दा २ सट मात्रै टार्गेटमा हानेको थियो । क्रोएसियाको टोलीमा लुका मोड्रिक र इभान राकिटिक यस खेलमा सहभागी थिएनन् ।
अब पोर्चुगल आफ्नो समूह ‘ए, ग्रुप ३’ मा स्पष्ट जितसहित ३ अंक जोडे सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा छ । फ्रान्स पनि ३ अंकसहित दोस्रोमा छ भने पाजित स्वीडेन र क्रोएसिया अंकविहीन हुँदै पुछारमा छन् ।
प्रकाशित मिति २१ भाद्र २०७७, आईतवार ००:४१